လှတယ် | | ဆောက်တည်ပုံ, အလှအပကုသမှု
ကျနော့်မေးစေ့အောက်မှာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ဆံပင်တွေထွက်လာတယ်။ pineez, creams (သို့) ဖယောင်းတွေတောင်မှငါဘယ်လောက်ပဲဖယ်ထုတ်လိုက်ပြန်ရင်သူတို့ပြန်ထွက်လာတယ်။ ပြနာကငါဟာအဖြူရောင်အသားအရေရှိတယ်၊ ဒါတွေကကျောက်မီးသွေးလိုအနက်ရောင်တွေဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါအရောင်ချွတ်ဖို့တောင်မကူညီဘူး။
မင်းအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါကြိုးစားမယ် သဘာဝစာရွက်, ယခုနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ငါကောင်းသောရလဒ်များကိုမြင်လျှင်, ငါသင်နှင့်အတူမျှဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြီးမားသောinရိယာများတွင်မသုံးသင့်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးအတွက်သာဖြစ်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး ၅ လုံး၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါဇွန်း ၂ ခွက်လိုတယ်။ မည်သည့်အရာက၎င်းတို့ကိုရေနည်းနည်းဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့်ရောနှောမည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်creamရိယာအတွင်းရှိသက်တမ်း ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်အသုံးချရမည့် creamy texture ကိုရရှိသည်အထိဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပူနွေးသောရေနှင့်အတူဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ငါတို့လုပ်ရမည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်လုပ်ဆောင်ပါ တစ်လ။ ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာဆံပင်တွေအားနည်းလာပြီးအမည်းရောင်တောင်မကျန်တော့ဘူး။ ငါသည်လည်းပုံမှန်အတိုင်းထက်အရေအတွက်လျော့နည်းကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မင်းကိုငါလုပ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
သင်လုပ်နိုင်သည် ပူစီနံနှင့်လည်းစမ်းပါ, မျက်နှာမျက်နှာဆံပင်သို့မဟုတ်ပင်နှောင့်အယှက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည် အဆိုပါနို့သီးခေါငျးအပေါ်ဆံပင် တစ်ခါတစ်ရံဒီaroundရိယာတဝိုက်ပေါ်လာပြီးအတော်လေးမသက်မသာဖြစ်ကြသည်။ သင်သူတို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့သော link ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ဆောက်တည်ပုံ » ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပါ
126 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်္ဂလာပါ၊ သုပ်အတွက်သင်ခရမ်းချဉ်သီးများအသုံးပြုပါသလား သင်ကျန်ရှိသောငွေပမာဏကိုနောက်ရက်များအတွက်သိမ်းထားပါသလား။ အရောအနှောဘယ်လောက်ကြာကြာကိုင်ထားမှာလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေဟာငါတို့သုပ်ထဲမှာထည့်လေ့ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့တစ်ပတ်ကိုသုံးပြီးကုသမှုခံယူရမယ့်လရဲ့ရက်သတ္တပတ်တိုင်းမှာငါတို့ဟာအရောအနှောအသစ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်။
ဟင်း၊ ဒါပေမယ့်မင်းကခရမ်းချဉ်သီးတွေကိုကြိတ်ခွဲလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေးခွန်းတစ်ခုမင်္ဂလာပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမှည့်နေပြီ၊ ဒါမှမဟုတ်ငါလည်းအတူတူပဲ။ ဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီးတွေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူး
mileiby rodriguez သို့ပြန်သွားရန်
ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီးများကိုမှန်မှန်သုံးပါသလား။ ah, ကျယ်ပြန့်မဟုတ်areasရိယာများနှင့်အတူဘာကိုဆိုလိုသလဲ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုအစေခံလားမကျတာလား။ ဆံပင်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုငါတွေ့ရင်ငါထပ်တူမလုပ်သင့်ဘူးလား။
ဟုတ်တယ်၊ ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီး။ သိပ်ကြီးမားတဲ့areasရိယာမဟုတ်ရင်ငါကမျက်နှာအပြင်တခြားဒေသတွေကိုဆိုလိုတာ။ ဒီစာရွက်မျက်နှာareaရိယာအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ကတည်းက။ သင်ရရှိသောရလဒ်များပြီးသည်နှင့်သင်ပြန်လည်အနားယူနိုင်သည်။ သူတို့ပြန်ထွက်လာလျှင်သင်ပြန်စတင်သည်။
ဟေ့နဲ့မင်း၊ မင်းဒီလိုလုပ်နေစဉ်မှာ၊ မင်းကထပ်တူဖယောင်းနဲ့ဆက်လုပ်နေတာလား။ အလုပ်မလုပ်ဘူးလား
waxing ကိုရပ်တန့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်ဆံပင်၏ခွန်အားပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ လူတိုင်းကအတူတူအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ မင်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သဘာဝကုသမှုဖြစ်သည့်အတွက်သင့်တွင်မှောင်မိုက်သောအသားအရေရှိသည့်တိုင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထိုအချက်ကိုမ ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်အရေပြားကိုပေါ့စေသည့်မည်သည့်အရာမျှပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
မလုပ်ပါနှင့်!!! ကျွန်ုပ်အနေနှင့်အညိုရောင်အရေခွံ ရှိ၍ အစက်အပြောက်များကိုစွန့်ခွာ။ ဘာမျှမဖြစ်နိူင်ကြောင်းသေချာပါသည်။
Eliih Darrk ဟုသူကပြောသည်
Eliih Darrk အားပြန်ပြောပါ
အဲလစ် TG ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ။ DEPILI ပြီးနောက်သို့မဟုတ်လှပသောသူနှင့်အတူလျှောက်ထားလိုက်ပြီကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမဖတ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
Alicia TG သို့စာပြန်ပါ
သင်ဆံပင်ကိုအသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိသလား။ သင်ဆံပင်မရှိတော့ပါ။ သင်၎င်းကို ဆက်၍ အသုံးပြုနေပါသလားသို့မဟုတ်ကုသမှုကိုပြီးဆုံးသည်နှင့် ထပ်မံ၍ မသုံးရန်လိုအပ်ပါသလော။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမှုကကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမွေးထူသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် navel နှင့်ခြေထောက်တွင်ဆံပင်များများရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကဏ္sectorsများအရအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်ခြေထောက် ဦး ဆုံးနှင့်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်လျှောက်ထားပါသလော
ဟယ်ငါတို့သည်အရည်ကျိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုရိုက်နှက်မေးခွန်းတစ်ခုကို? ဆံပင်အစဉ်အမြဲသွားသို့မဟုတ်မ? အနမ်း
တစ်ပတ်ကိုအကြိမ်ဘယ်နှစ်ကြိမ်ထည့်သင့်ပါသလဲ။ ငါ့မှာဆံပင်အရမ်းရှိတယ်၊ ရလဒ်ကိုကြည့်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ငါလုပ်ဖို့သွား, ထောက်ခံချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိပြီး၊ သင်၌ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ထိုသန်စွမ်းမှုအလွန်ပြင်းထန်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်အနည်းငယ်ပိုကြာလိမ့်မည်။
ကြည့်ရတာငါ့ဝမ်းဗိုက်နဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာဆံပင်ရှိတယ် me ဒါကငါ့ကိုအရမ်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်
x က ke nm ကြိုက်တယ်
နှင့် pz မီတာငါ waxing ခံရဖို့ရှိသည်။
အရမ်း maluko ပဲ
ထို့အပြင်ငါ x ke m နှင့်အတူမရှိခဲ့ပါကြောင်း x အရှက်ကိုပေးတော်မူ၏။ n ဟာလှတယ်၊ ငါရှိတယ်
အဲဒါအရမ်း maluco ပဲ ..
ငါဒီဆေးကဆံပင်ကိုအားနည်းအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်၊ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်၊ တစ်ပတ်အပတ်တိုင်းသုံးတာလား။ သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်တစ်လ?
ဆံပင်ကလောင်တာလား သို့မဟုတ်သင်မှလျှောက်ထားသူတို့ကိုအမြစ်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်? သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာထွက်ခွာကြသလဲ
မင်္ဂလာပါမာရီယာ! ၎င်းကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်၊ လတိုင်းအပတ်တိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်။
ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ဇွန်းနှစ်ဇွန်း (ကော်ဖီ) သို့မဟုတ်သာမန်ဇွန်းများလား။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုသတိထားမိပြီးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ခဏတာဖြစ်ရန်လိုသလား။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာခရမ်းချဉ်သီးမှည့်သော (သို့) အစိမ်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုရောနှောထားခြင်းရှိ / မရှိ၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ။ အရောအနှောကိုအသုံးမပြုမီသင်သည်theရိယာကိုဖယောင်းညှစ်ရမည်လော။ ဒါမှမဟုတ်theရိယာဖယောင်းမရှိလျှင်, အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်နည်း
Estrellita ခရမ်းချဉ်သီးများသည်မှည့ ်၍ ကြေမွသွားရမည်။ တစ်ပတ်ကိုသုံးကြိမ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်။
alba, areaရိယာဖယောင်းမပါဘဲဖြစ်နိုင်သည်, တူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်
ခရမ်းချဉ်သီးများသည်မှည့်သောသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူတို့ရောနှောထားခြင်းရှိ / မရှိ၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ
ဟိုင်းကာလာ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကမှည့်နေပြီးကြိတ်ခွဲရမယ်။ ၎င်းကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်အထိပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ငါအရမ်းထွက် freaked ခဲ့သည်။ ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ရလဒ်ကသင့်ကိုရလဒ်ကောင်းတွေပေးတယ်လို့မင်းပြောတယ်။
ငါဒီစာရွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီးတွေနဲ့လည်းစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်၊ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ဒါနဲ့ငါလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဟာအသုပ်ခရမ်းချဉ်သီးမဟုတ်ဘဲစိမ်းလန်းသောခရမ်းချဉ်သီးကိုရည်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်၊ အထူးသ Physalis ixocarpa ။ ဒီမှာစာရွက်ပါ
Physalis ixocarpa tomatillos (အရေပြားရှိခရမ်းချဉ်သီးများ)
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူထိပ်ဆုံး2ဇွန်း
ဆံပင်ကိုဖယ်ချင်သောremoveရိယာ၌ဤငါးပိကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုတစ်လလျှင် ၃ ကြိမ်အသုံးပြုသည်။
အရောအနှောကို ၁/၂ နာရီခန့်ထားပြီးလျှင်ရေဖြင့်ဆေးသည်
တစ်လပြီးနောက်လျှင်နွေးပြီး moisturizing မုန့်ကိုသုံးပါ
ခရမ်းချဉ်သီးများကိုအနည်းငယ်ဖုတ်ပြီးတစ်ဝက်ခွဲပေးပါ။ ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားလိုသည့်နေရာတွင်ပွတ်ပါ။ ၂၀ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အထိလုပ်ပြီးချန်ပါ။ လိုချင်သောရလဒ်များကိုတစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်အထိရရှိသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alberto !!! မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်အတွက်ငါကုသမှုကိုငါစလုပ်တော့မယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ် !!
yudy exmid ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းအဲလ်ဘာတို၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်၊ ဖယောင်းသို့မဟုတ်ဆံပင်ထိပ်တွင်ဤစာရွက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၌ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
yudy exmid အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲကြည့်လိုက်၊ ဆံပင်အားလုံးကိုဖယ်လိုက်ရင်သိချင်လား။ နှင့်ဆံပင်နောက်တဖန်အထူထွက်လာလျှင် ??? ငါနှုတ်ခမ်းမွှေးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်ကြည့်ရတာလဲ၊ ငါဟာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိတော့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းခရမ်းချဉ်သီးများများနည်းနိုင်ပါသလား။ ပြီးတော့အဲဒါကိုတစ်ဝက်ခွဲပြီးခရမ်းချဉ်သီးကိုအနည်းငယ်နည်းနည်းဖုတ်တာလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တစ်ခုကပိုထောက်ခံသလဲ။
မင်္ဂလာပါ ... ကောင်းပါပြီ၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်လျှင်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအတိအကျသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပါးလွှာအောင် ပြုလုပ်၍ မြင်နိုင်မှုနည်းစေပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေဆဲလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုတိတိကျကျဖယ်ရှားပစ်ပြီးပြီလား ... ဒါကိုလုပ်ပါသလား အသားအရေကိုစွန်းထင်းခြင်း (သို့) ထိုကဲ့သို့သောအရာကဲ့သို့သောအရေပြားကိုထိခိုက်စေခြင်းမဟုတ်ပါလား။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဤကုသမှုကိုမည်မျှကြာကြာအသုံးပြုသင့်သည်၊ နည်းနည်းနည်းနည်းလောက်ပြောနိုင်ပြီး၊ ဆေးများသည်မှည့်သင့်သည် (သို့) ကြိုက်နှစ်သက်ရမည်။ ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီးမှဖြစ်စေ၊ မဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်အောက်ပိုင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုဖြေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
graxiaz kuidate အနမ်း
မင်္ဂလာပါ၊ လှလှလေး၊ ကျွန်ုပ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့မင်းကိုအလိုရှိရင်မင်းကို msn ထဲထည့်ပါ။ နှင့်ဆေးတစ်လက်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်သင့်တယ်ဆိုရင်။ ပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်နမ်းခြင်းများ
sonia အကယ်။ ငါသည်သင်တို့၏မေးလ်ပေးချင်ပါတယ်!
မော်ဒယ် Elle ဟုသူကပြောသည်
ဆံပင်ကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားရန်အခြားမည်သည့်သဘာဝနည်းလမ်းဖြင့်သင်သိသနည်း။ ကျွန်တော့်ကလေးဘဝတုန်းကအမေအတွက်ပက်ကျက်နည်းလမ်းကိုကျွန်တော့်ကိုအသုံးချရန်အခွင့်အရေးမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ၎င်းသည်တကယ့်ကိုထိရောက်သော်လည်း၎င်းသည်ကလေးဘဝတွင်ပြုလုပ်ရမည်။ သူတို့ကိုကလေးများအနေဖြင့်ပြုကျင့်ခဲ့ကြပြီးသူတို့၏လက်မောင်းများနှင့်သူတို့အသုံးပြုသည့်ဒေသများတွင်ဆံပင်မပေါက်ခဲ့ကြသောအမျိုးသမီးများစွာကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ဆံပင်မပေါက်စေလိုသောနေရာတွင်ပက်ကျိပွတ်နယ်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤနည်းသည်ပထမဆုံး villi မပေါ်လာမှီအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာမိခင်၊ အဒေါ်၊ ဝမ်းကွဲများ၊ မိန်းကလေးများနည်းနေရင်ဆံပင်မညှပ်စေဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုကြိုးစားပါ။
ဟဲလို .. ငါမေးချင်တယ်၊ ဒီအရောဟာရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားသလား။ သို့မဟုတ်နေ့တိုင်းအသစ်တစ်ခုရသလား။ ... မင်းရဲ့အီးမေးလ် xfavor ကိုသင်ပြန်ပြောနိုင်မလား။ အဲဒါငါ့ရဲ့မေးခွန်းပဲ။ ဘယ်မှာသိမ်းရမလဲမသိဘူး၊ ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးလဲ။
stretch marks အတွက်ဘယ်လိုစာရွက်မျိုးကိုသင်သိပါသလဲ။
အခွံနှင့်အတူဒါန။ Anita၊ ဒီကုထုံးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့အရေပြားကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ စာရွက်ကဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်သေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သဘာဝကုစားနည်းများကိုကြိုးစားရန်ငြီးငွေ့ပြီးဤစာရွက်ကိုစမ်းချင်သည်။ သို့သော်ယခုနည်းနည်းဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပေါက်တော့မည်မဟုတ်လော ကျေးဇူးပြု၍ မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါစလုပ်နိုင်တယ်
ဆံပင်ကြီးထွားမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ရာနေရာတွင်ပွတ်သပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤနည်းသည် ပို၍ အသုံး ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘေးအန္တရာယ်များစွာလိုအပ်ပါကသင်သည်ဖျော်ရည်အများစုကိုအသုံးပြုသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဆံပင်တွေကိုသတိမပြုမိတော့တာကြာပြီ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါကိုယ်တိုင်ခရမ်းချဉ်သီးဖျန်းဖျန်းဆေးကိုသုံးပြီးနေ့တိုင်းလိမ်းလိုက်တယ်။ တကယ်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ အမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်။ နှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံပါ
Shira ဂျက်ဆင် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ amm ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အတိုင်းခရမ်းချဉ်သီးကနေပါပဲ
Shira Jackson အားပြန်ပြောပါ
ဟေ့အဖ မင်းရဲ့ကိစ္စကိုငါတို့နဲ့ဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မသိရပါကအထိခိုက်မခံသောအသားအရေသည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့ကြာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပူစေလိမ့်မည်။ နေရောင်ကာကွယ်ဆေးသုံးရန်အရေးကြီးသည်မဟုတ်လား။
Silvia က MS Lobato ဟုသူကပြောသည်
Silvia MS Lobato အားပြန်ပြောပါ
Sara Ramirez ဟုသူကပြောသည်
ခင်ဗျားပြောတာကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ အဖွားတစ်ယောက်ကနဖူးသေးငယ်တဲ့နဖူးနဲ့မွေးဖွားလာတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ ကျွန်တော့် abulea ကမွေးကင်းစအဒေါ်၊ အဲဒီသစ်ပင်ပေါ်ကကင်ထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့သူမရဲ့နဖူးကိုပွတ်သပ်လိုက်တယ်။ သူဟာလုံးဝသူ့ကိုနာကျင်မှုမရှိစေခဲ့ဘူး။ သူငယ်ငယ်ကတည်းကသူမျောက်တစ်ကောင်နဲ့တူခဲ့တယ်၊
ဟယ်လို! အားလုံး underarm toရိယာမှလျှောက်ထားလို့မရပါဘူး? အဘယ်ကြောင့်?
Diana Laura သို့ပြန်သွားပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်လို့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဖယောင်းအပြီးငါဖယောင်းကိုသုံးပြီးချက်ချင်းပဲလုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါချက်ပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ သူတို့ရဲ့အပလီကေးရှင်းဟာကြားနေပြီးအသစ်ပြန်ပေါ်လာတယ်။
မင်္ဂလာပါဆိုနီယာ၊ ကျွန်တော်ဒီသံမဏိပြားနဲ့ဒီအရောအနှောကိုရောသံသယဖြစ်စရာရှိပါသလား။ ၅ ထပ်ပေါင်းထည့်ရန်မလိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားများစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးသို့မဟုတ် ၂ ခုထက် ပို၍ ပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာမှဆံပင်များကိုဖယ်ရှားလိုပါကဘီကာဗွန်နိတ်မည်မျှထည့်ရမည်နည်း။ & ခရမ်းချဉ်သီးအရာအားလုံး & အခွံနှင့်အတူကြေမွပါသလား? သင်ဖြေနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည် (ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါဆိုနီယာ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပြီးသင်မွေးဖွားလာခြင်းမရှိပါ။ ဒါ့အပြင်လက်နက်ထဲမှာသုံးလို့ရမလား။ မင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘယ်သူမှဘာမှမပြောပဲ ... တစ်ယောက်ယောက်ကစမ်းကြည့်ပြီးသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာလား။
ချစ်ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်း။ မင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ reseta ကဘာရလဒ်မှမရဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ၀ ယ်လိုက်ပြီ။
ကင်ညာ <3 ဟုသူကပြောသည်
cri $ tiiaN .. !! : D ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့ဒါပေမယ့်သင် komo ရဲ့ရုပ်ပုံကိုတင်သင့်တယ်
cri $ tiiaN .. သို့ပြန်သွားရန် !! : D
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများရေချိုးနေစဉ်သို့မဟုတ်ထိခိုက်နစ်နာသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သို့ခြောက်သွေ့သောအရေပြားနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆပ်ပြာဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာအနှိပ်ခံသော pumice ကျောက်ခဲကိုကြိုးစားကြိုးစားသော်လည်းငါ့ကိုမထိခိုက်စေရန်ဂရုပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောဆံပင်များအနှိပ်ခံခြင်းကိုလည်းဖယ်ရှားပေးသည်။
Liliana Michell Hurtado Garcia ဟုသူကပြောသည်
Liliana Michell Hurtado Garcia သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ .. စောင်းလေးနဲ့သုံးလို့ရမလား ??? ဒီစာရွက်…
မင်္ဂလာပါ Veronica၊ ဒီစာရွက်ဟာသေးငယ်သောforရိယာများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သောကြောင့်၊ လက်မောင်းတို့သည်ကျယ်လွန်းသဖြင့်သင်သည်တူညီသောရလဒ်မရနိုင်ပါ။
Alberto Sabio Palomares ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါကအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များဆည်းပူးကြသည်။ အသုံးပြုသည့်ခရမ်းချဉ်သီးသည်ရှေးခေတ်ကဆေးဖျက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်ခရမ်းချဉ်သီးမှာ Physalis angulosa ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ သစ်တော်သီးများ၊ အဆိုပါစာရွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှယိုယွင်းမူကြောင်းကိုမြင်သည်။ ဤအရာကိုငါတွေ့ပြီ -
(Physalis angulosa) ။ solaneas အားလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်း၏အသီးများသည်မိုးတိမ်များကိုစားသုံးရန်နှင့်၎င်းကိုလျှော့ချရန် suasado ပြောင်းဖူးများတွင်အသုံးပြုသည့်နည်းတူကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာသားဖွားဆရာမများနဖူးတွေအများကြီးနဖူးကိုဖုံးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မွေးဆံပင်တွေကိုနင်းဖို့အတွက်လိမ်းပေးတာကြောင့်ဒီနည်းလမ်းဟာလှော်စေခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ရင်းမြစ် - ဆေးပညာ၊ သမိုင်း၊ ရှုခင်း။ Ochoa
ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့် ((Physalis ixocarpa) အကြောင်းပြောခဲ့ဖူးသည့်ယခင်မှတ်ချက်တွင်) ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်လှော်ကြောင်းသေချာစွာသိမြင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကိုမတွေ့ခင်ရှာဖို့လိုတယ်၊
Alberto Sabio Palomares အားပြန်ပြောပါ
Alberto ငါသဘောတူသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းသည် citrus ကုန်ကြမ်း၌ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေပြားဆဲလ်တစ်သျှူးများကိုဖောက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ချက်ပြုတ်လေလေပူလေလေပူနွေးလေလေပူလေလေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသီးဖျော်ရည်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်စုပ်ယူပြီးအသားအရေကိုမဆုံးရှုံးစေပါ။ မင်္ဂလာပါ
Noranly moran ဟုသူကပြောသည်
မက္ကဆီကိုရှိခေါ်ခရမ်းချဉ်သီးဟုခေါ်သော kreo ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်သင်အမြန်ပေးသောခရမ်းချဉ်သီးများကိုလွှင့်ပစ်လျှင်ပင်များစွာပေးသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ရလဒ်များရရှိပါက၎င်းသည်ကာဗွန်နိတ်အနည်းငယ်ဖြင့်ကင်။ ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
Nallely Moran အားပြန်ပြောပါ
အဲဒါကို Miltomate လို့ခေါ်တယ်
Yoana bostera ဟုသူကပြောသည်
Yoana Bostera အားပြန်ကြားပါ
Karen gomez ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုငါ့လက်ပေါ်မှာဆံပင်ရှိတယ်၊ မင်းကအိမ်မှာလုပ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့မင်းပြောတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ။
karen gomez သို့ပြန်သွားရန်
အဖြေများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုဤသူသည်မည်သူ OK ။
ဘလော့ဂ် post ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငါနဲ့ Ami ကအဲဒီအတိုင်းပဲ။ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာသည်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာခြင်း၊ ဟော်မုန်းနှင့်ရောဂါဗေဒဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄ င်းသည်ဟော်မုန်းရောဂါမှဆင်းသက်လာသောအမျိုးသမီးမှထုတ်လုပ်သောဟော်မုန်းများထက် IRSUTISM ဟုခေါ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိလှပပြီးကျွန်ုပ်တို့ထဲမှလှပသောသူများသည်ဖြစ်စဉ်များကိုခံစားရသည်။ အလွန်လှပသောလူတယောက်ကသင်၎င်းကိုနေထိုင်နေကြောင်းပြောပြသည်နှင့်တူညီသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လူတိုင်းတွင်ဆံပင်အချိုးအစားနည်းသည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ကတည်းကနှစ်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ ဒီမှာငါ့ရလဒ်တွေကိုမျှဝေ။
၁။ ပထမ ဦး စွာအရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်ဆံပင်အထူးကုဆရာဝန်ထံသွားပါ။
၂။ ဆရာဝန်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး သည်အမြစ်ပြproblemနာကိုရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးသင့်အားဟော်မုန်းကုသမှုပေးလိမ့်မည် (သင်၏ကုသမှုကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မူတည်သည်။ များစွာသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ , ငါ့အမှု၌ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဆရာဝန်ကသူ့ကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်) ။
၃။ အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပါ။ ငါ့ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးလိမ်းဆေးများ၊ ဆပ်ပြာများနှင့်ပျားရည်များကိုသူတို့လုပ်သမျှအားလုံးသည်ပွင့်လင်းသောအပေါက်များဖြစ်ပြီးအရေပြားအတွင်းပိုင်းကိုအရေပြားကိုကူးစက်စေခြင်း၊ ထို့အပြင်၎င်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ထွက်သွားရာမှအရေပြားလမ်းကြောင်းကိုထူပြီးအရေပြားကိုကောင်းစွာပြန်လည်မထုတ်လုပ်နိုင်လျှင်ထွက်ပေါက်များကိုထွက်စေသည်။ သင့်မှာမရှိတဲ့နေရာတွေကထွက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်စူပါအထိခိုက်မခံနိုင်သောအရေပြားရှိသည်၊ ကရင်မ်ပင်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး၎င်းတို့ကိုနှစ်မိနစ်ကျော်မခံနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားရန်မလုံလောက်ပါ။
5. လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် Pulse အလင်း။ အစကတည်းကဤကုသမှုခံယူရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်တစ်လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီရိတ်မသောက်ဘဲနေရုံသာဖြစ်သည်။ ငါ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုထွန်ယက်လိုက်သည်ဟူသောအတွေးကငါ့ကိုကြောက်လန့်စေသည်။ အစည်းအဝေးတွေဟာ ၃ ပတ်တကြိမ်လစဉ်ဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဖြစ်လို့၊ အစည်းအဝေးမရှိတဲ့နေ့တွေမှာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်3session ပြီးနောက်ပြီးနောက်သိသာဖြစ်ကြသည် ?? အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ထားတာလား သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်၊ ဒါကသင့်ကိုမထိခိုက်စေဖို့သတိထားပါ။
Pulse light သည် ၆ နှစ်မှ ၇ နှစ်အတွင်းတွင်အချို့သောနေရာများကိုပိုမိုအားဖြည့်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကို retouching ဟုခေါ်သောကုသမှုကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကုသမှုများစွာကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသားအရေအလွန်ပျက်စီးသွားသောကြောင့်၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အချိန်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းငါအလွန်လိုအပ်သည့်အခါမှသာတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ် waxing ဆက်လက်။ ဒါဟာနာကျင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကမီးမရှို့တာ၊ ရုတ်တရက်ဆွဲတာတောင်မှဂရုမစိုက်ဘူး။ ဆံပင်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်သူတို့ကမီးလောင်နေတဲ့အတွက်ဆံပင်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဆွဲရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲအလှပြင်ဆိုင်ကိုဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ရမယ်၊ eachရိယာတစ်ခုစီမှာတစ်ကြိမ်သာသွားဖို့သတိထားရမယ်။ မြှုပ်ထားသောဆံပင်အတွက် pinzee ကိုမညှပ်ရန်သတိထားပါ။ တစ်ချိန်ကဖယောင်းထပြီးအရေပြားကိုအေးစေပြီးအအေးခံရန်မိနစ်အနည်းငယ်ခွင့်ပြုပါ။ ပြီးဆုံးသွားသောအခါသင်၏လက်ချောင်းများနှင့်everythingရိယာကို ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိအစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အရသာခံပြီးအစိမ်းရောင်အပင်များကို (အခန်းအပူချိန်အထိအအေးခံရန်) ညင်ညင်သာသာအသုံးပြုပါ။ အခြားမည်သည့်အရာမျှမသုံးပါနှင့်။ ငါဖြတ်သန်းသမျှအရာရာအပြီးတွင်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လည်းအချိန်ယူရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၅ လတာကာလအတွင်းဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းသည်လုံလောက်စွာလောင်ကျွမ်းသည်။ ၎င်းသည် citrus (သို့) အလွန်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ခရမ်းချဉ်သီးကိုကောင်းစွာလှော်ပြီးအတွင်း၌ချက်ပြုတ်ရန်အရေးကြီးသည်။
မင်းရဲ့ပို့စ်ကိုဖတ်ရင်းအဲလ်ဘတ်တိုမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့အရေပြားကိုဖယောင်းသုတ်လိုက်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကကြိုးစားကြည့်လျှင်မည်သည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုမသိရပါကဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်မိသည်။ ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလှူငွေသည်မင်းကိုအစေခံ။ အတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေပေးလိမ့်မည်။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်!
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ်။ အဲဒါကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတွေ့ပြီလို့ပြောမိတဲ့အရာတွေ၊ ငါဟာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ဆံပင်တွေအများကြီးနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာဟာ utopia နဲ့တူတယ် (မစဉ်းစားဘဲနဲ့) လေဆာရောင်ခြည်နှင့် pulsed light၊ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသော၊ စျေးကြီးပြီးမည်သူ့ကိုမျှလက်လှမ်းမမှီကြောင်းပင်သိရှိသော်လည်းယခုပင် 'လှပသောစိမ်းလန်းသောခရမ်းချဉ်သီး' ဖြင့်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သော (ယေဘုယျအားဖြင့်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း) နှင့်အလားမျှော်လင့်ချက်ပိုမိုရရှိစေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါနင့်မျက်နှာပေါ်ကဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ငါစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ ဒါကကြားနေအာရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းကပိုပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲထွင်းထုခြင်းသို့မဟုတ်ပွတ်တိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ Goodbye:>
မင်္ဂလာပါဖာနန်ဒို၊ ခရမ်းချဉ်သီးကိုအညီအမျှပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ဖို့ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်မကြိုးစားမယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့နှစ် ဦး လုံးအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲအဲလ်ဘတ်တိုနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဟာအသားကင်ဖြစ်သင့်ပြီးတစ်ပတ်တစ်ရက်မှာသူကမိတ်ကပ်မပါဘဲလုံးဝအနားယူသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မအကြံပြုတဲ့လိမ်းဆေးတွေပါ။ သခွားသီးမုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းကလန်းဆန်းစေပြီးပြန်လည်သစ်လွင်စေတယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါဖာနန်ဒို၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွင်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တစ်ချောင်းမျှဖြင့်ပျံ့နှံ့နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ရေရှည်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည်အရေပြားကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေကြောင်းသင်သိပါလိမ့်မည်။ အဲလ်ဘတ်တိုနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဟာအသားကင်ဖြစ်ရမယ်။ တစ်ပတ်တစ်ရက်မှာမိတ်ကပ်မပါဘဲလုံးဝအနားယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်သင့်တယ်။ သခွားသီးမုန့်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးအသစ်စက်စက်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
ကောင်းတယ် ငါလှပသောသူတို့ကိုလျှော့ချနိုင်ပုံကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ၊ အရာ ၀ တ္ထုများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏အသားအရေအလွန်ပျက်စီးခြင်း၊ သင်၏ကုထုံးကိုစမ်းသပ်တော့မည်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ များစွာသောလှပသောတ ဦး တည်းနှင့် waxing မှတဆင့်သွားနှင့်နှောင့်အယှက်လှပသောသူတို့အားကြီးထွားလာမြင်နေစောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ် !!!! ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့ဆံပင်အပြည့်နဲ့မျက်နှာလည်းရှိတယ်။ အဆိုပါရယ်စရာအရာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုငါ hyperestrogenesis နှင့်အတူထွက်လာသောကြောင့်, ဒါကြောင့်ဟော်မုန်းမဟုတ်၊ အနည်းဆုံးအထီးဟော်မုန်းမဟုတ်ဘူး။ ဆံပင်ထူထပ်သောအမျိုးသမီးသည်ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သော prolactin ပိုလျှံမှထွက်လာသည်။ ဒါကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုစစ်ဆေးတဲ့ဆရာဝန်ကဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်အခြေခံတာလားဆိုတာမေးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဟိုင်ရူဆေးဟာအထီးဟော်မုန်းမှမဟုတ်ဘဲမွေးဖွားတာပါ။
မင်္ဂလာပါဖရန့်၊ ယခုသင့်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ပြီ၊ မိသားစုဆရာဝန်၊ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နှင့်ယခု endocrinologist၊ သွေး၊ သားဥအိမ်ရာနှင့်အခြားသူများမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဟုတ်မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာနေသည်။
Edith garcia ဟုသူကပြောသည်
Edith Garcia သို့စာပြန်ပါ
Marishu အဆိုပါ Vampir Wolf က ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆံပင်ကိုသဘာဝမှဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်၏စာရွက် (မျှဝေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည်) ကိုဝေမျှရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
သကြားဇွန်းတစ်ဇွန်းနှင့်ပြောင်းဖူးမှုန့်ဇွန်းတစ်ဝက်ကိုဥဖြူဥတစ်လုံးနှင့်ရော။ အရောအနှောစေးကပ်ပြီးတသမတ်တည်းမဖြစ်စေပါ။ ဒီအရောအနှောကိုသင်၏အသားအရေပေါ်သို့သုတ်လိမ်းပြီးခြောက်သွေ့နေပြီဟုခံစားရပါကဆံပင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ရှိလက်ချောင်းများဖြင့်ခြစ်ပါ။ ထို့နောက်ကျန်သည့်အရာများကိုဖယ်ရှားရန်နွေးသောရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ။
ခြေထောက်တွေရိတ်ပြီးအရမ်းစိတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ ငါသာတစ်ပါတ်အဘို့ဤလုပ်နေတာနှင့်ရလဒ်များကိုမယုံနိုင်စရာများမှာ! သူတို့ဟာအရင်ကနဲ့တူတယ် (သူတို့ဟာအရမ်းကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်!) ဒါ့အပြင်သကြားနဲ့ကြက်ဥတွေကြောင့်ခြေထောက်တွေကအရမ်းပျော့ပျောင်းပါတယ်၊ ဒါကအများဆုံးဖြစ်တယ်၊ ငါအလေးအနက်အကြံပြုတယ်။ ကံ !!
Marishu The Vampir Wolf မှပြန်ကြားချက်
Marishu, ငါစာရွက်စမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကငါ့ကို exfoliator နဲ့ epilator အဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ်မှာလုံးဝအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ မင်းဘယ်လိုဖယ်ထုတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်၊ သင်ကမျက်နှာဖုံးအဖြစ်အသုံးမပြုနိူင် မင်းဒါကိုကျင့်သုံးသလား အဲဒါဟာအားနည်းနေတာလား၊
မေးခွန်းတစ်ခုကခရမ်းချဉ်သီးအနီရောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့မရင့်သေးသေးသောအစိမ်းရောင် (သို့) အစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီးများဖြစ်ရမည်။
Brenda Andía ဟုသူကပြောသည်
အဆင်ပြေတယ်! ငါခရမ်းချဉ်သီးအနီနှင့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ (သူတို့နိုင်ငံမှာအစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီးကိုမရောင်းကြဘူး) ငါသုံးတယ်၊ ငါ့လက်မောင်း၊ ကျွန်တော်မလျှောက်ခင်ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းကိုပြလို့မရခဲ့ဘူး။ ၎င်းတို့ကိုရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းရလဒ်မှာထူးခြားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့ဒါမဟုတ်ပါ
အနက်ရောင်, သူတို့သေးငယ် (တဖြည်းဖြည်းနည်းနည်း) လာ။ သူတို့လဲကျနေတယ်, ငါသေချာမသိပေမယ့်သူတို့ကအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပစ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချ :)
Stephy Bartra Fuentes Davila ဟုသူကပြောသည်
ငါပီရူးကပါ။ ဒီအစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီးတွေကဒီမှာမရောင်းဘူး။ သူတို့ဟာ Aguaymanto ကိုသာရောင်းကြတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်သိသလား။
Stephy Bartra Fuentes Davila ကိုပြန်ပြောပါ
Sofia valentina ဟုသူကပြောသည်
Sofia Valentina သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်သည်အနည်းငယ်ထူးဆန်းကြောင်း (ကျွန်ုပ်ထင်သည်) သိပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုတင်ပါးဆုံတွင်းappliedရိယာတွင်အသုံးချနိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီစာရွက်ဟာလက်နက်အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တယ် 🙂
ဟိုင်းဟေးဟင်းဟင်း။ ဒီစာရွက်ကငါအတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလား၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေဟာခရမ်းချဉ်သီး ၅ လုံးရဲ့ဖျော်ရည်ကိုကြိတ်ခွဲနေသလား။